သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုရလာသဖြင့် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ တိုးထုတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လိုအပ်မှု၏ ၁ဝ ရာခိ?? - Yangon Media Group
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုရလာသဖြင့် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ တိုးထုတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လိုအပ်မှု၏ ၁ဝ ရာခိ??
သဘာဝဓာတ် ငွေ့ပိုရလာသဖြင့် ယူရီးယားဓာတ် မြေသြဇာတိုးထုတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လိုအပ်မှု၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ တိုးထုတ်နိုင်သေးပြီး ပျမ်းမျှတစ်နေ့လျှင် မက်ထရစ်တန်ချိန် ၁၂ သိန်းနှင့် ၁၄ သိန်းကြားလိုအပ်နေသေးကြောင်း မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်က ပြောသည်။
ဇွန် ၇ ရက်ကနေပြည်တော် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲတွင် ၎င်းကအထက်ပါတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”စက်ရဲ့စွမ်းအင်မြှင့်တင်နိုင် စွမ်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုမိုရရှိလာတဲ့အတွက် ကြောင့်လည်းကောင်း ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာကို စက်ရုံတွေမှာ ပိုထုတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပိုထုတ်လာတာ တိုင်းပြည်အတွက် လုံလောက်သလားလို့မေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရေနံနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းက စက်ရုံနှစ်ရုံက ထုတ်လုပ်တဲ့ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာက ယမန်နှစ်ကတန်ချိန်ထက် တစ်သိန်းကျော်ပဲရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာတန်ချိန်က ဒီနေ့ အနေအထားအရ တန်ချိန် ၁၂ သိန်း နှင့် ၁၄ သိန်းကြားထဲမှာရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအသုံးပြုရန် မြောင်းတကာစက်ရုံနှင့်ကံကြီးဒေါင့် ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံတို့မှ ထုတ်လုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ကံကြီးဒေါင့် စက်ရုံမှအနည်းငယ်သာ ပိုထုတ်နိုင် သေးကြောင်းသိရသည်။
”’ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ စက်ရုံအနေနဲ့ အခုသဘာဝဓာတ် ငွေ့လည်းပိုရလာတယ်။ နွေရာသီမှာနှစ်ပတ်လည် စက်ပြုပြင်ရေးမှာလည်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်အောင် ပြုပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အခု မြောင်းတကာဓာတ်မြေသြဇာ စက်ရုံကထုတ်တာဆိုရင် ပျမ်းမျှတစ်နေ့လျှင် မက်ထရစ်တန်ချိန် ၃ဝဝကျော် ထုတ်နေရာက ဒီနေ့ဆိုရင် မက်ထရစ်တန် ၄၁၄ တန်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ ကံကြီးဒေါင့်စက်ရုံက တော့ မက်ထရစ်တန်ချိန် ၃ဝဝ မှ ၃၂ဝ/၃၃ဝ ထိသာအနည်းငယ်ပို ထုတ်နိုင်ပါသေးတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်ပမှဓာတ်မြေသြဇာများတင်သွင်းနေရပြီး နောင်တစ်ချိန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုရသည့် အချိန်၌လည်းကောင်း၊ LNG မှ တစ်ဆင့်ဓာတ်မြေသြဇာပိုထုတ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများရှိလာပါက ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ နိုင်ငံအတွင်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်မြေသြဇာအား တင်ဒါစနစ် ဖြင့် သတင်းစာထဲတွင် ကြော်ငြာကာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရောင်းချ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ပဲမျိုးစုံ တင်ပို့ ရောင်းချမှု အများဆုံးဖြစ်သော မုံရွာတွင် သီးသန့် ပွဲရုံတန်းတစ်ခု ဖော်ထုတ??
ဂီတကို သေသည်အထိ ဖက်တွယ်ထားမယ့် အော်ဇီအော့စဘွန်း
အစိုးရသက်တမ်း နှစ်နှစ်ပြည့် ချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် စစ်တွေမြို့မှ ဘူးသီးတောင်-မောင်ေ
”ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားက ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ရင်းပြီး ရိုက်တယ်လို့ သဘောထားပါတယ်” ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ၊
ပထမအကြိမ် အစိုးရ နည်းပညာကောလိပ် (မိုးညှင်း) မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ လက်တွေ့ပစ္စည်းမျာ??